उपवास र प्रार्थनाको शक्ति को लागि | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स उपवास र शक्ति को वर्षा को लागी प्रार्थना
उपवास र शक्ति को वर्षा को लागी प्रार्थना
भजन ११०: Th तपाईंको प्रजाको दिनमा भोलि गर्भवतीदेखि नै पवित्रको सुन्दरतामा तपाईंको प्रजा इच्छुक हुनेछन्, तपाईंको जवानीको शीत।
पावर संसारको अन्य धर्महरूबाट इसाईमतलाई अलग गर्ने के हो? यस सन्दर्भमा शक्तिले आत्मिक अधिकार, शैतान र त्यसका दूतहरू माथि जीवनको परिस्थितिहरूको बारेमा कुरा गर्दछ। प्रत्येक विश्वासी जसले शक्ति प्रदर्शन गर्दैन उसले सँधै शैतानको दया र यस संसारका तत्वहरूमा रहनेछ। आज हामी उपवास र प्रार्थनाको बारेमा हेर्नेछौं शक्तिको वर्षाको लागि। सबै धर्मशास्त्रहरूमा हामी देख्छौं कि कसरी परमेश्वरले आफ्ना सन्तान ईश्वरीय शत्रुहरूमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्नुभयो। प्रस्थानको पुस्तक फरोहमाथि विभिन्न प्रकारका प्रदर्शन र ईश्वरको शक्ति प्रदर्शनले भरिएको छ, जब उनले इस्करियललाई जान इन्कार गरे। पुरानो नियममा, हामीले मोशा, जोशुआ, शिमशोन, एलिया, एलीशा, डेभिड आदिको जीवनमा शक्ति प्रकट भएको पनि देख्यौं।
नयाँ नियम एक अपवाद थिएन, येशू शक्ति को कच्चा प्रकटीकरण को माध्यम बाट जन्म भएको थियो, एक कुमारी गर्भवती र हाम्रो प्रभु लाई जन्म। पृथ्वीमा आफ्नो (येशू) जीवनभरि, उहाँ शक्ति प्रकट गर्नुभयो र जब उहाँ स्वर्ग उक्लँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई निम्न कुरा भन्‍नुभयो:
मत्ती २:28:१ And तब येशू आएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 'स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिइएको छ। १ 18: १ therefore त्यसैले अब जाऊ र सबै देशहरूलाई सिकाओ, तिनीहरूलाई बुबा, छोरा र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देओ: २:28:२० जे जे मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरे ती सबै पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। , म सधैं तपाईंसँगै छु, संसारको अन्त सम्म। आमेन।
उनले यो पनि भने:
प्रेरित १: But तर पवित्र आत्मा तिमीमाथि आइसके पछि पनि तिमी शक्ति प्राप्त गर्नेछौ। अनि यरूशलेम, सारा यहूदिया, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाही हुनेछौ।
यसैकारण उपवास र शक्तिको वर्षाको लागि प्रार्थनाको विषय तपाईको लागि अत्यन्त समयसापेक्ष छ, यस लेखमा तपाईले शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने, कसरी यसलाई पहुँच दिने र यसलाई कसरी सक्रिय गर्ने पनि सिक्नुहुनेछ। मैले केही शक्तिशाली प्रार्थनाहरू पनि थपें ​​जुन तपाईं आत्मिक शक्तिको खोजीमा जाँदा तपाईंलाई आफ्नो आत्मिक व्यक्तिलाई पुनर्जीवित पार्न मद्दत गर्दछ। यस लेखको अन्तमा, तपाईंको मसीही जीवन येशूको नाममा शक्ति प्रकट हुनेछ।
कसरी शक्ति प्राप्त गर्ने
केवल भाषा शैतानले बुझ्ने शक्तिको भाषा हो। शक्तिविना क्रिश्चियन, सधैं यसको शिकार हुनेछ अँध्यारो बलहरु र प्राकृतिक शक्तिहरु। तपाइँको सफलता शुरू हुन्छ जहाँ तपाइँको शक्ति को अभिव्यक्ति शुरू हुन्छ र यो रोकिन्छ जहाँ तपाइँको शक्ति को अभिव्यक्ति रोकिन्छ। अब हामी कसरी शक्ति प्राप्त गर्छौं?
नयाँ जन्म अनुभव:
जुन दिन तपाईंले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र अनन्त उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो त्यस दिन तपाईंले शक्ति प्राप्त गर्नुभयो। जुन दिन तपाईं नयाँ जन्म लिनुभयो, पवित्र आत्मा तपाईंभित्र तपाईंको आत्मामा बास गर्न आउनुभयो। को पवित्र आत्मा शक्तिको स्रोत हो, त्यो आध्यात्मिक अधिकार हो। परमेश्वरका सबै बच्चाहरूसँग पवित्र आत्मा हुन्छ, यसैले परमेश्वरको प्रत्येक बच्चाले आफ्नो भित्र शक्ति राख्छ। मार्क १:: १-16-१-17 ले हामीलाई यसो भन्छ:
मार्क १ 16:१ And र यी चिन्हहरू विश्वास गर्नेहरूलाई पछ्याउँदछ; तिनीहरूले मेरो नाममा भूतहरू भगाउँनेछन्। तिनीहरूले अन्य भाषाहरू बोल्नेछन्। 17 तिनीहरूले सर्पहरू लिनेछन्। यदि तिनीहरूले घात विष पिए पनि तिनीहरूलाई कुनै हानि हुनेछैन। यदि तिनीहरूले आफ्ना हात रोगीहरू माथि राखे भने तिनीहरू निको हुनेछन्। ”
तिमीले त्यो देख्यौ? विश्वासीहरूको हैसियतमा, हामीलाई शैतान र जीवनको परिस्थितिहरूमाथि आध्यात्मिक अधिकार प्रकट गर्न नियुक्त गरिएको छ। दुःखको कुरा अझै पनी बाँकी नै छ, धेरै क्रिस्टियनहरू ख्रीष्टमा भएको आफ्नो शक्तिशाली ओहदाबारे अनजान छन्, धेरैलाई थाहा छैन कि शैतान र शासकहरू र शक्तिहरूमाथि आत्मिक अधिकार छ। म एफिसी १: २०-२२ र एफिसी २: 1--20 मा परमेश्वरको वचनले भनेका कुरालाई मन पराउँछु, कृपया यस शास्त्रपदहरूमा हेर्नुहोस्:
एफिसी १:२० जुन उनले ख्रीष्टमा गरेका थिए, जब उनले उहाँलाई मृत्युबाट बिउँताए र स्वर्गको ठाउँमा उनको दाहिने हाततर्फ राखे, १:२१ सबै राज्य, शक्ति, सामर्थ्य, प्रभुत्व र सबै भन्दा माथि यो नाम यस संसारमा मात्र होइन तर आउनेवाला पनि हो। १:२२ अनि सबै थोक उहाँकै पाउमुनि राखियो र उहाँलाई सबै थोकको प्रमुख हुन मण्डलीलाई दिनुभयो।
एफिसी २: Even जब हामी पापमा मरेका थियौं, हामीलाई ख्रीष्टसंगै बिउँताइदिनुभयो, (अनुग्रहबाट तपाईं मुक्ति पाउनुहुन्छ;) २: And र हामीलाई एकसाथ उठाउनुभयो र हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा बस्न बाध्य पार्नुभयो:
माथिको धर्मशास्त्रबाट तपाईले देख्नुभयो कि हामी विश्वासीहरू भएको नाताले हामी येशू ख्रीष्टको शक्तिको सिंहासनमा विराजमान छौं। तसर्थ, जसलाई, ख्रीष्टलाई हराउन सक्दैन, तपाईंलाई पराजित गर्न सक्दैन, जसलाई ख्रीष्टलाई वशमा गर्न सक्दैन, तपाईंलाई वशमा लिन सक्दैन। केवल येशू ख्रीष्टले पृथ्वीमा आफ्नो जीवनकालमा सबै शक्तिहरूमाथि प्रभुत्व जमाउनुहुने भएकोले, तपाईं र म प्रभुत्वमा बस्नु पर्छ। अब हामी कसरी यो शक्ति पहुँच गर्न सक्दछौं?
कसरी बिजली पहुँच गर्ने?
हिब्रू ११: But तर विश्वास बिना उसलाई खुशी तुल्याउन असम्भव छ: जो परमेश्वरमा आउँछ उसले विश्वास गर्नुपर्दछ कि उहाँ हुनुहुन्छ, र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँ प्रतिफल दिनुहुन्छ।
त्यहाँ विश्वासीहरू भित्र पावर पहुँच गर्न सक्ने तीन प्राथमिक तरीकाहरू छन्। उनीहरु:
१. विश्वास: तपाईं भित्र ईश्वरको शक्ति विश्वासद्वारा मात्र पहुँच गर्न सकिन्छ। परमेश्वर एक जादूगर हुनुहुन्न, उहाँ विश्वासको परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ केवल विश्वासको वातावरणमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईले उहाँभित्रको शक्तिहरू प्रदर्शन गर्न तपाईको विश्वास प्रयोग गर्नै पर्छ। येशूले सँधै भन्नुभएको छ 'यो तपाईंको विश्वास अनुसार होस्' यसको मतलब तपाईंको विश्वासको मापनले तपाईंको जीवनमा तपाईंले देखाउने शक्तिको मापन निर्धारण गर्दछ। रोमी १०:१:10 ले हामीलाई भन्दछ कि ख्रीष्टको वचन सुन्न र बुझेर विश्वास आउँछ। त्यसैले तपाईंको विश्वास विकास गर्न तपाईं ख्रीष्टको वचनको विद्यार्थी हुनुपर्छ।
२. बोल्दै: तपाई भित्रको शक्ति पहुँच गर्ने दोस्रो तरिका तपाईंको मुखबाट छ। बोल्नु भनेको विश्वासको आत्माको अभिव्यक्ति हो २ कोरिन्थी :2:१:4। बन्द मुख भनेको बन्द गन्तव्य हो, त्यसैले तपाईंले आफ्नो अवस्थाहरूमा परमेश्वरको वचन अनुसार बोल्नु पर्छ। यदि तपाईं निको हुन चाहानुहुन्छ भने, उपचार बोल्नुहोस्, यदि तपाईं सफलता चाहानुहुन्छ भने, सफलता बोल्नुहोस्। मार्क ११:२:13 ले हामीलाई यो बुझाउँदछ कि हामीसँग के हुन्छ भन्ने छ।
यहोशू १: the व्यवस्थाको यो पुस्तक तिम्रो मुखबाट निस्किनेछ। तर दिन र रात यसमा ध्यान दिनुहुनेछ र त्यसमा लेखिएका सबै कुरा पालन गर्नलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। तब तिमी सफल हुन सक्छौ र तिम्रो सफलता सफल हुनेछ।
शब्द गर्नु भनेको पावर पहुँचको प्रमुख तरीका हो। बाइबलले भनेको केवल शब्द सुन्ने मात्र होइन, वचन पालन गर्ने हो, याकूब १:२२। तपाईंले केवल परमेश्वरको शक्तिलाई तपाईंको जीवनमा देख्नुहुन्छ जब तपाईं परमेश्वरको वचनलाई काममा लानुहुन्छ। यो तपाईंमा काम गर्ने परमेश्वरको वचन हो, जसले तपाईं मार्फत अचम्मका काम गर्दछ।
कसरी शक्ति सक्रिय गर्ने
उपवास र प्रार्थनाहरू तपाईको आत्मा भित्र ईश्वरको शक्तिलाई सक्रिय पार्ने एक मात्र तरिका हो। उपवासले यसको सांसारिक चाहनाको शरीर वा शरीरलाई इन्कार गर्दैछ, जबकि प्रार्थना भनेको तपाईंको आत्माको माध्यमले परमेश्वरसँग जोड्दैछ। उपवास र प्रार्थनाले शरीरलाई दुर्बल बनाउँछ र आत्मालाई बलियो पार्दछ। पवित्र आत्मा हाम्रो आत्मामा बास गर्नुहुन्छ। धेरै विश्वासीहरूले ईश्वरलाई सुन्न नसक्नुको कारण यो हो कि त्यहाँ धेरै सांसारिक स their्केतहरू आउँदछन् जुन उनीहरूको शरीरबाट आउँदछ, ती संकेतहरूले उनीहरूको आत्मालाई बादल लगाउँछ र उनीहरूलाई स्पष्टरूपमा परमेश्वरको कुरा सुन्न रोक्दछ। मत्ती6मा, येशूले हामीलाई जीवन, खाना, कपडा र आश्रयका बारे चिन्तित नहुनु भनेर चेतावनी दिनुभयो, बरु उहाँले हामीलाई उहाँ र उहाँको राज्य खोजी गर्न भन्नुभयो र यी सबै कुरा स्वाभाविक रूपमा हामीमा आइपुग्नेछ।
उपवास र प्रार्थना, तपाईंलाई शक्ति दिदैन, यसले तपाईंलाई तपाईंको भित्रबाट नै परमेश्वरको शक्ति सक्रिय पार्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको आत्मा मानिसलाई परमेश्वरको आवृत्तिसँग मिलाएर राख्छ। पास्टरको रूपमा, जब तपाईं उपवास र प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईं वेदीमा अझ प्रभावकारी हुनुहुनेछ जब तपाईं परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुहुन्छ। आसा विश्वासी, जब तपाईं उपवास बस्नुहुन्छ र कुनै पनि परिस्थितिमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईंको आध्यात्मिक आँखा त्यस चुनौतीको समाधान देख्नको लागि खोलिन्छ। । हामीले हाम्रो आध्यात्मिक प्राधिकरणमा कार्य गर्दा हामीलाई संलग्न हुन मद्दत गर्न मैले केही प्रार्थनाहरू कम्पाइल गरेको छु। यी उपवास र शक्ति को वर्षा को प्रार्थना को लागी पनी यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं येशूको नाम मा आफ्नो जीवन मा शक्ति को अभाव कहिल्यै छ। तपाईंको आध्यात्मिक उन्नतिको लागि यो प्रार्थनामा संलग्न गराउन म तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्दछु।
१ बुबा, म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईं येशूको नाममा सबै शरीरका परमेश्वर हुनुहुन्छ
२. पिता, म तपाईंलाई येशूको नाममा नयाँ जन्मको साथ शक्ति प्रदान गरेकोमा धन्यवाद छ
Father. बुबा, म येशूको नाममा कृपा प्राप्त गर्न ग्रेसको सिंहासनमा हिम्मतसाथ प्रवेश गर्दछु
I. आज म निर्भयतासाथ घोषणा गर्दछु कि पवित्र आत्माले मलाई येशूको नाममा सबै शक्तिको वशमा राख्न शक्ति प्रदान गरेको छ।
God. परमेश्वरको आत्मा ममा काम गरिरहनुभएको छ, त्यसैले शैतानको कुनै पनि कुराले मलाई येशूको नाममा हानि गर्न सक्दैन
I. म आज घोषणा गर्दछु कि परमेश्वरको च power्गाइ गर्ने शक्ति ममा काम गरिरहेको छ, यसैले कुनै पनि बिरामी व्यक्तिले जसलाई मैले आफ्नो हातमा राखें येशूको नाममा तत्काल उपचार प्राप्त गर्नेछ।
Dear. प्रिय पवित्र आत्मा, येशूको नाममा तपाईंको शक्तिको वर्षाको साथ मलाई नयाँ बप्तिस्मा दिनुहोस्
I. म घोषणा गर्दछु कि म ख्रीष्टको साथमा बसिरहेको छु, येशूको नाममा सबै राज्य र शक्ति भन्दा धेरै
I। म येशूको नाममा सबै बोक्सीविद्या शक्तिहरुमा मेरो प्रभुत्वको घोषणा गर्दछु।
१०. म येशूको नाममा गरीबीमाथि मेरो प्रभुत्वको घोषणा गर्दछु
११. म येशूको नाममा रोग र रोगहरूमाथि मेरो प्रभुत्व घोषणा गर्छु
१२. मीठो पवित्र आत्मा, येशूको नाममा मलाई नयाँ ताजा र अद्भुत प्रभाव पार्नुहोस्
१ Holy. हे पवित्र आत्मा, आजदेखि मेरो मुखबाट विश्वासको सबै वचनहरू येशूको नाममा विश्वास गर्नुहोस्।
१ Lord. मलाई प्रभुलाई अँगाल्नुहोस्, येशूको नाममा तपाईंको वचनको विद्यार्थी हुन
१ Father बुबा, मलाई येशूको नाममा मर्न सिकाउनुहोस्।
१.. म येशूको नाममा हरेक शैतानिक अवरोधहरूमा मेरो प्रभुत्वको घोषणा गर्दछु
१.. प्रिय प्रभु, म येशू नाममा तपाईं मेरो strenght नवीकरण
१.. पवित्र आत्मा, मेरा सबै कमजोरीहरूलाई येशूको नाममा स to्केत गर्नुहोस्
मेरो नाम आगोको कोइला द्वारा, येशूको नाममा घोषणा गर्नुहोस्
२०. अब अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना गर्न सुरू गर्नुहोस्, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस् न्यूनतम minutes मिनेटको लागि।
मेरो आध्यात्मिक सशक्तीकरणका लागि धन्यवाद येशूलाई।
अघिल्लो लेखमाजीवनमा चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रार्थना पोइन्टहरू।
अर्को लेखमाछुटकाराको भावनाबाट उद्धारको प्रार्थना
नेट्टी ओनुमरा जनवरी २,, २०२० १०:०० अपराह्न
महान शोषणको लागि थप अभिषेक। भगवान तपाईको दाख यार्डमा तपाईलाई ठूलो शक्ति दिनुहुन्छ।
Rev.Joy आर्थर टाई जनवरी २,, २०२० १०:०० अपराह्न
प्रभुले तपाईंलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ
१० रोजगार खोज्नेहरूका लागि प्रार्थना बिन्दुहरू